शाओमी मी को लागत5350० भन्दा कम हुनेछ Androidsis
यद्यपि सियामीको बिक्री स्थिर रहेको छ, एसियाली निर्माता क्षेत्र मा बेंचमार्क हुन जारी छ। Xiaomi Mi4, उसको अन्तिम महान मोती, हामी यसको कर्भ, गुण र मूल्यको संयोजनको साथ प्रेममा पर्‍यौं। र अब एशियाई निर्माता हरेक दिन छ शाओमी मी 5, टर्मिनल जसले हामीलाई फेरि यसको गुणवत्ताको साथ चकित पार्नेछ।
र यो यो हो कि एक फुटेको छविले यसको मूल्यको थपमा, मि of को प्राविधिक विशेषताहरूको बारेमा बोल्दछ: अर्को शियाओमी फ्लगशिप 5०० डलर भन्दा बढी हुँदैन, लगभग १ 350। यूरो बदल्नको लागि।
श्याओमीले फोनलाई वास्तवमै आकर्षक मुल्यमा प्रस्ताव गर्न बाजी दिनेछ
हामीले जान्न सकेका लागि, यो आशा गरिन्छ कि ईl Xiaomi Mi5 सँग .२ इन्च स्क्रीन छ एक रिजोलुसनको साथ जुन २2560० x १1440० पिक्सेल (Quad HD) सम्म पुग्नेछ। यसको प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 810१०, हो हो संस्करण v2 Xiaomi द्वारा वर्धित र यो अति गरम समस्याहरु छैन।
यदि हामी यसलाई थपौं भने3 जीबीको रिम मेमोरी जसले शाओमी मीलाई एकीकृत गर्दछ,, हामी HTC One M5 वा Xperia Z9 प्लसमा पत्ता लगाएका सुविधाहरू भएको फोन भेट्यौं। आउनुहोस्, पूर्ण विकसित फ्ल्यागशिप।
एक सामर्थ्य Mi5 का क्यामेराको साथ आउँनेछ। र यो यो हो कि नयाँ एशियाई फ्लगशिप किलरसँगaछ अप्टिकल छवि स्थिरीकरणको साथ १ me मेगापिक्सल रियर क्यामेरा, सम्भवत सोनी सेन्सर। र तपाईंको अगाडि क्यामेरा? ठीक छ, सेल्फीहरूका प्रेमीहरूको लागि उपहार, विशेष गरी यदि हामीले ध्यानमा राख्यौं भने यसमा १ 13 मेगापिक्सल रिजोलुसन हुनेछ।
अन्यथा एक 3.000००० mAh ब्याट्री, यो शक्तिशाली मोबाइल फोनको हार्डवेयरको सबै वजनलाई समर्थन गर्न पर्याप्त छ जुन एन्ड्रोइड L.१ एल का साथ काम गर्दछ, शाओमी एमआईयूआई interface इन्टरफेस मुनि।
र यसको मूल्य? ठिक छ, फिल्टर गरिएको पानामा संकेत गरिए अनुसार, cयसको मूल्य २,2.399। युआन हुनेछ, जुन विनिमय दरमा करीव 350 XNUMX० युरो हो। एक सम्झौता यदि हामीले शाओमी एमआई5का प्राविधिक विशेषताहरुलाई ध्यानमा राख्यौं भने। अवश्य पनि, सामान्य रूपमा यो टर्मिनल आधिकारिक रूपमा युरोपमा आउँदैन त्यसैले यदि तपाईं एकाई प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंले यसलाई वितरकको माध्यमबाट किन्नुपर्नेछ र त्यसपछि मूल्य अब उस्तै हुनेछैन। यद्यपि यसले भुक्तान गर्न जारी राख्नेछ।
तपाइँ नयाँ Xiaomi Mi5 को बारेमा के सोच्नुहुन्छ? के तपाईंलाई लाग्छ कि अर्को शियाओमी टाइटनले यसको पूर्ववर्तीहरूको सफलता प्राप्त गर्नेछ? के यसले LG G4 वा सामसु Galaxy ग्यालेक्सी S6 एज जस्ता हेवीवेटहरूको आक्रमण रोक्न सक्षम हुनेछ?
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Xiaomi » शाओमी मी को लागत5350० भन्दा कम हुनेछ
म एमआई for को लागि जाँदै थिएँ तर म केही बेर पर्खनेछु, म अर्जेन्टिनाबाट छु :)। यो गर्न सक्षम हुनको लागि यो टिकट हुन सक्छ तर यो उसको कान्छो भाईको जस्तै उत्तम हुनेछ! ! !
Mi4 धेरै राम्रो फोन हो तर तपाईं राम्रो गर्नुहुन्छ, यसले केही महिना काम गर्दैन र एमआई it यसको दृश्यबाट प्रभावशाली हुनेछ।
डेनिस टोरेस भन्यो
के यो डुअल सिम हो?
डेनिस टोरेसलाई जवाफ दिनुहोस्
अहिलेको लागि हामी निश्चित रूपमा थाहा छैन किनकि चुहावट जानकारीले यस सुविधाको बारेमा कुरा गरेन, यद्यपि हामी आशा गर्न सक्छौं यो डुअल सिम हुनेछ। अब सबै प्राविधिक सुविधाहरू यसको लागि निश्चित हुन पर्खने समय हो।
सादर र तपाइँको टिप्पणी को लागी धन्यवाद
सधै जस्तो, ती e०० यूरोहरू भ्याट र आयात शुल्क थपिए पछि long०० लाs्ग हुन्छन्।
यो अविश्वसनीय देखिन्छ कि, यस बिन्दुमा, तपाइँ चिनियाँ मूल्यको मुद्दामा गिरावट जारी राख्नुहुन्छ।
के तपाईंलाई थाहा छ यदि यसले अनलक गर्न फिंगरप्रिन्ट रिडर समावेश गर्दछ?
सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता मूल्य चिनियाँ मोबाइल निस्सन्देह स्पेनिश स्टोरहरुमा करीव € for€० को लागि meizu mx5 हो meizu को लागी एक १०० मोबाइल एक उत्तम मोबाइल हो।
म विश्वास गर्न सक्दिन कि उनीहरू क्वाककममा बेटि। गर्न चाहन्छन जुन यो वार्म-अप समस्याहरूको साथ छ र नयाँ सॉक्सलाई राम्रोसँग प्रदर्शन गरीरहेको छ।
[APK] गुगल प्ले स्टोर दृश्य सुधारको साथ अद्यावधिक गरिएको छ